Ekwentị ndị kacha mma inye na ụbọchị nna | Gam akporosis
Ka enweghị onyinye maka ụbọchị Nna? Ekwentị gị ọ dị nká nke na ị na-akwụ ụgwọ ya otu ugboro n’izu. You chọrọ ikwe nkwa na ọ ga-ewetara gị ihe nketa gị? Soro nke anyị ndu zụta ngwa kacha mma maka ụbọchị Nna!
N'ime ntuziaka a ị nwere ike ịchọta ekwentị ndị kachasị atụ aro na ntinye, ọkara na oke elu. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ezigbo smartphone maka ụbọchị nna, gụọ na
1 Kasị mma ntinye-ọkwa smartphones
2 Igwe kacha mma n'etiti etiti maka ụbọchị nna
3 Ekwentị ndị dị elu maka ụbọchị Nna
Kasị mma ntinye-ọkwa smartphones
Ego gi o dikwa oke? Chọghị ịre akụrụ kachasị amasị gị ịzụta mobile na ụbọchị Nna? Nkebi nke a masịrị gị. Na otutu. Inyekwu nke ahụ maka euro 80 i nwere ike inwe ezigbo ekwentị.
Ma ọ bụ ihe na-erughị ya Moto E, ọnụ ya nwere ihuenyo 4.3-inch, processor abụọ, 1 GB nke ebe nchekwa RAM na 4 GB nke nchekwa dị n'ime (gbasaa site na oghere kaadi micro SD ya) mere ka ngwaọrụ a bụrụ otu n'ime smartphones kachasị mma. Naanị ma ọ bụ igwefoto 5 megapixel ya na-enweghị ọkụ, ọ bụ ezie na euro 79 ọ na-efu, ajụla pears na elm.
Nhọrọ nke abuo bu Sony Xperia E1. Ihe nhazi ya nke 1.2 GHz dual-core Qualcomm processor yana 1 GB nke ebe nchekwa RAM, na mgbakwunye inwe 4 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa na 32 GB site na oghere kaadi micro SD ya, mee ka ngwaọrụ a bụrụ nhọrọ mara mma, mana ọ bụrụ na anyị nwere ọkwa na anyị nwere ike ịchọta ya maka euro 69. N'ezie, igwefoto 3 megapixel gị na-enweghị ọkụ ọkụ agaghị ewere ihe kachasị mma.
Igwe kacha mma n'etiti etiti maka ụbọchị nna
Ka anyị gabiga n’etiti etiti. Youchọrọ ịzụta ezigbo ekwentị maka nna gị maka ụbọchị Nna na ọnụ ahịa mara mma? Egbula oge, Huawei G620S bụ azịza ya. Igwe a dị ike nwere ihuenyo 5-inch, 4 GHz 1.2-core processor, 1 GB nke RAM na 8 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa site na oghere kaadi micro SD ya mere ka ọnụ ọgụgụ a bụrụ nhọrọ kacha mma ịtụle.
Anyi aghaghi ichefu igwefoto 8 megapixel ya di ike na flash, nke n’eme ihe kariri ijide mmadu. Ego ole ka Huaewi G620S na-efu? Na Yoigo ị nwere ike ịzụta ya ugbu a maka euro 139, ma ama bụ n'efu. Ihe ị na-enweghị ike ịjụ.
Nhọrọ nke abuo gha abu Moto G, nke ga - efu euro 179 n'efu, mana ịhụ na ha nwere ụdị ọrụ ntanetị dị otú ahụ, n'onwe m ga - aga Huawei G620S. Ọ bụ ezie na ịnweghị mmasị na echiche nke ịzụta mobile China maka nna gị, Moto G bụ ezigbo nhọrọ.
Ekwentị ndị dị elu maka ụbọchị Nna
Ọ bụrụ na ị meriri lọtrị ma ọ bụ na ịchọrọ ichebe ihe nketa gị n'agbanyeghị ihe ọ bụla, nhọrọ kachasị mma bụ ịrụ ọrụ ya ma nye nna gị ezigbo ekwentị dị elu. Ma na e nweghị obi abụọ, ndị LG G3 bụ azịza ya.
Anyị atụleworị yargo na latọ na LG G3 ya mere enwere m ike ịgwa gị ntakịrị gbasara atụmatụ ya dị ike. Ihe m nwere ike ịgwa gị bụ na mfe Nwere ike ịchọta ya maka euro 359.
Nhọrọ m nke abụọ ga - abụ Samsung Galaxy S4, ama ọzọ nwere njirimara dị egwu na nke ahụ, na mbata nke Galaxy S6 na S6 Edge, ị nwere ike ịchọta ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ obere maka naanị 295 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kacha mma smartphones na-enye na Nna Day
[Ngwa] APK kachasị mma inye onyinye n’ụbọchị Nna